Ady amin’ny tazomoka : nanolotra “tablettes” 65 ny Amerikanina - ewa.mg
Ady amin’ny tazomoka : nanolotra “tablettes” 65 ny Amerikanina
News - Ady amin’ny tazomoka : nanolotra “tablettes” 65 ny Amerikanina
Manohana hatrany ny fanjakana
malagasy amin’ny ady atao amin’ny aretina tazomoka ny
sampandraharaha amerikanina misahana ny fampandrosoana
iraisam-pirenena USAID. Eo koa ny tetikasan’ny filoham-pirenena
amerikanina miady amin’ny aretina tazomoka (PMI).
Nanolotra “tablette” 65 ho an’ny tetikasa nasionaly miady amin’ny
tazomoka (PNLP) ny Amerikanina hamongorana ny tazomoka any amin’ny
distri­kan’Antsirabe II sy Antsira­nana I.
Anisan’ny paikady kendrena ny hanafoanana tanteraka ny aretina any
amin’ireo distrika ahitana taha ambany. Ampian’ ny PMI sy ny USAID
ny PNLP eo amin’ny fanatanterahana ny tetikasa hampahomby ny ady
Hitarika ny asa fikarohana sy ny fanadihadiana ary ny fitaterana ny
tranga momba ny tazomoka rehetra ny PNLP.
Hozaraina amin’ny sampandraharahan’ny fahasalamana sy ny
tobim-pahasalamana any amin’ny distrika ireo “tab­let­te” avy
amin’ny governemanta amerikanina ireo. Ha­nampy ny mpiasan’ny
fahasalamana amin’ny fanaraha-maso haingana sy ny fanaovana tatitra
any amin’ny tompon’andraikitra. “Hanamora ny fahazoana haingana
valiny sy ny vonjy aina hatao izany”, hoy ny tale jeneralin’ny
USAID, i John Dunlop.
Manampy ny PNLP ihany koa ny tetikasan’ny USAID, ny Impact Malaria,
tanterahin’ny PSI Madagascar. Anisan’izany ny fanofanana ireo
mpanentana fahasalamana. Efa nisy ny fanofanana teknisianina miasa
amin’ny laboratoara any amin’ny faritra folo hamantatra ny tazomoka
amin’ny fampiasana ny “microscope”.
L’article Ady amin’ny tazomoka : nanolotra “tablettes” 65 ny Amerikanina a été récupéré chez Newsmada.
Kitra Ambatondrazaka: tompondakan’ny D2 Ambakireny-Betsiboka
Ny fitiavam-baolina, tsy mahalavi-tany! Tompondaka diviziona faharoan’ny seksion’ny baolina kitran’Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro, tamin’ity taom-pilalaovana 2018 ity, ny ekipan’ny Zook Massik-n’Ambakireny ao amin’ny distrikan’i Tsaratanàna, faritra Betsiboka. Resiny teo amin’ny fandakana ny “tirs au but”, 5 no ho 4, teo amin’ny famaranana, ny ekipan’ny Marianina-Ambatondrazaka II. Nisaraka ady sahala 1 no ho 1 ny roa tonta tao anatin’ny 90 mn nilalaovana sy taorian’ny fanalavam-potoana 15 mn indroa miditra. Niady ny baolina ary ny Zook Massic no nampiditra ny baolina voalohany, saingy nosahalain’ny tompon-tanana izany avy eo. Raha tsiahivina, 120 km avy eo Ambatondrazaka ny misy an’Ambakireny, any atsimo-andrefan’Amparafaravola. “Manao latsakemboka izahay “staff”, na mivarotra tee-shirt na mikarakara alim-pandihizana ho fidiram-bolan’ny ekipa”, hoy ny Dr Mamy Harijaona, filohan’ny ekipa. Lavitra ary mihodina be sy ratsy lalana avy eo Ambakireny mankany Tsaratanàna, foiben’ny distrika misy ny Zook Massic ka aleony milalao aty Ambatondrazaka, lalana vita tara. . RarivoL’article Kitra Ambatondrazaka: tompondakan’ny D2 Ambakireny-Betsiboka a été récupéré chez Newsmada.
Niafara tamin’ny famonoana ho faty ny disadisam-pianakaviana tany Betafo. Voasambotry ny zandary any Mandoto, tao anatin’ny roa andro, ireo telo lahy samy mpiray tampo, izay namono nahafaty ny anabavin’izy ireo ihany. Nindaosin’ny fahafatesana nandritra an’io vono olona io ihany koa ny vadin’ilay vehivavy, tamin’ny alin’ny 7 marsa lasa teo. Niainga tamin’ny tsy fahasalaman’ny zanak’anadahin’itsy renim-pianakaviana namoy ny ainy itsy ny disadisa tao anatin’ity fianakaviana tany Ambohitraivo-Ambohimasina, any Betafo ity, tamin’ny volana febroary lasa teo. “Tsy sitrana na dia notsaboin’ny ray aman-dreniny aza ilay narary. Nentina notsaboina tany amin’ny anadahin-dreniny hafa izy, andro vitsy taty aoriana. Teo anelanelan’izay no nitondrana azy tany amin’ny mpimasy ihany koa. Nivoaka tao ny filazana ny fisian’ny famosaviana ka niteraka ny tsy fahasalamana tamin’io marary io. Namoy ny ainy itsy farany, andro vitsy taorian’izay.” Teny faran’ilay marary Talohan’ny nahafatesany ihany koa no voalaza fa nitenenan’ilay marary sy nanononany ny anaran’iry vehivavy maty novonoina « tamin’ny fahasahiana nanao zavatra taminy » ! Nanomboka teo no nizaran’ ny fianakaviana ho roa. Andaniny ireo niampanga an’io vehivavy voatonontonona io ary an-kilany ireo nandà an’izany. Nisy tamin’ireo anadahiny no fantatra ho nandrangaranga an’ilay fomba fitenenana hoe : « ny maso solon’ny maso », raha ny tatitry ny fakàna am-bavany natao tamin’ireo voasambotra araka ny nampitain’ny loharanombaovao akaiky ny famotorana. “Nohafaran’ny rain’io zanaka nodimandry io ho tonga tany aminy ny rahalahiny roa, tamin’ny 6 marsa lasa teo. Famaritana ny fandaharam-potoana any Ambohimasina, izay nisy ny tokantranon’ny anabaviny nampangain’izy ireo ho fototry ny fahafatesan-janany no natao tao. Nisy nahita tokoa ny nahatongavan’izy telo lahy tamin’io tanànan’ny anabaviny sy ny vadiny io, tokony ho tamin’ny 4 ora tolakandro, tamin’ny 7 marsa. Somary nivoaka ny tanàna naka vohitra iray izy ireo mandra-pahamaizin’ny andro. Tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany alina no tonga ny rahalahin’izy ireo iray miaraka amin’ny lehilahy roa hafa. Nifanaraka ny rehetra teo fa ny ombin’izy mivady no halaina. Rehefa tonga tao amin’ilay trano notafihina anefa dia nalain’izy telo mirahalahy niaraka nigadona voalohany ireo mpivady. Nentin’izy ireo nisintaka ny tanàna, avy eo”, hoy hatrany ny loharanom-baovao. Fifanarahana tsy voahaja « Mody nangataka vola dimy tapitrisa tamin’ny zaodahiny ny iray tamin’izy telo. Nilaza ho tsy manana anefa io vadin’ny anabavin’izy ireo io ka taorian’izay no nokapaina tamin’ny famaky ny tendany. Maty teo no ho eo ilay rangahy. Nitomany ny vadiny nahita izany ary nanontany hoe fa iza ianareo no sahy manao an’izao aminay? Ny andro alina rahateo ka tsy mifankahita. Novonoin’izy ireo ihany koa anefa ilay anabaviny, rehefa nijoro nanatona an’itsy farany izy telo lahy. Maty tsy tradrano ihany koa io renimpianakaviana io », araka ny fanampim-baovao azo momba an’ity vono olona tany Betafo ity. Lasa niparitaka izy enindahy, taorian’izany rehetra izany. “Tezitra ireo telo lahy tonga farany noho ny tsy nanarahan’iretsy telo lahy tonga voalohany ny fifanarahana ny amin’ny tsy hakàna afa-tsy omby ary tsy arahina famonoana olona tao amin’io tokantrano lasibatra io. Noho izay hatezerana izay no voalaza fa tsy nakan’iretsy farany na inona na inona tao amin’ny tranon’izy mivady niharam-boina”, hoy ny mpanao famotorana. Mbola karohina iretsy telo lahy tonga farany, araka ny fantatra. L’article Disadisam-pianakaviana :: Novonoin’ireo anadahindravehivavy izy mivady est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra – Fanomanana ny “Mondial 2022”: efa eto ny coach Rabe, hamoaka ny lisitry ny Barea
Efa eto an-tanindrazana Rabesandratana Eric, mpanazatra vaovao ny Barea. Hampahafantatra ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy ny tenany.Raha tsy misy ny fiovana farany, ho fantatra anio alarobia ny anaran’ireo mpilalao handrafitra ny Barea de Madagascar, amin’ny fampivondronana voalohany. Rabesandratana Eric, mpanazatra vaovao izay efa tonga mihitsy eto an-toerana, ny hanonona izany. Hisy ny fihaonany amin’ny mpanao gazety, etsy amin’ny foibe toeran’ny federasiona (FMF), etsy Isoraka.Azo antoka fa hampahalala ny fandaharam-potoana rehetra amin’ny fanomanana sy ny fanazarantenan’ireo mpilalao rehetra ny tenany. Ny ho fampivondronana ireo mpilalao mpila ravinahitra sy ireo avy eto an-toerana. Eo ihany koa ny hahalalana ny fotoana hanombohan’ny fanazarantenan’ny Barea de Madagascar ary indrindra izay ekipa hifanandrina amin’i Madagasikara, eo amin’ny lalao firahalahiana raha toa ka misy izany. Efa ao anatin’ny datin’ny Fifa mantsy ny mpilalao rehetra amin’izao fotoana izao.Inoana fa hamaly ireo fanontaniana maro mahakasika azy ihany koa Rabesandratana, amin’ity fihaonany amin’ny mpampahalala vaovao ity. Anisan’ireny ilay fanambarana nataon’i Abel Anicet, kapitenin’ny Barea de Madagascar, ny alatsinainy lasa teo.Marihina fa tafiditra amin’ny fiomanan’ny Barea de Madagascar amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny “Mondial 2022” izao fiavian-dRabesandratana eto Madagasikara izao.Tsiahivina fa hiatrika lalao firahalahiana avokoa ireo ekipa iray vondrona amin’ny Barea, amin’izao datin’ny Fifa izao ka ny RD Kongo hidona amin’i Tonizia, ny 5 jona, avy eo amin’i Mali, ny 11 jona. I Tanzania hikatroka amin’i Malawi, ny 13 jona ary ry zareo Beninoà hihaona amin’i Sierra Leone, ny 14 jona. TompondakaL’article Kitra – Fanomanana ny “Mondial 2022”: efa eto ny coach Rabe, hamoaka ny lisitry ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Minisitra Raharinirina Vahinala : ady amin’ny fandripahana ala any Amoron’i Mania
Mamita iraka any amin’ny faritra Amoron’i Mania, tamin’ity herinandro ity, ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny harena lovainjafy (Medd), sy ny minisitry ny Fitsarana, mikasika ny ady amin’ny Covid-19. Nohara­raotin’ny minisitry ny Medd, Raharinirina Vahinala Bao­miavotse ny diany any, ni­haonana tamin’ireo tompon’andraiki-paritry ny tontolo iainana sy ny harena lovainjafy (Dredd) any an-toerana. Anisan’ny nodinihina ny hikarohana vahaolana amin’ny fandripahana ny harena voajanahary, ny doro ala sy ny fikapana hazo an-tsokosoko, ny fanaovana saribao tsy misy fahazoan-dalana. Eo koa ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, indrindra any anaty ala sy ny faritra arovana, sns.Sahirana ny mponinaManana ny tandavanala Ambositra –Vondrozo (Co­fav) ny faritra arovana any Amoron’i Mania, mitohy hatrany Matsiatra Ambony hatrany Ihorombe. Maika tokoa ny fikarohana vahaolana amin’ny fanimbana ny tontolo iainana. Antony, voatery manimba ny harena voajanahary ny mponina satria tsy manana velon-tena maharitra, araka ireo voatanisa etsy ambony ireo. Marihina fa anisan’ny tena sahirana ireo mpanao asa sokitra ao Ambositra, satria akora fototra tena ilain’izy ireo ny voamboana sy ny andramena nefa voarara ny fitrandrahana azy, efa an-taona maro izao. Tamin’ny volana jolay iny, nahatratra 104 ny trano lasy niorina tsy ara-dalàna tany anaty ala manodidina ny kaominina Ivongo, distrika Ivohibe, faritra Ihorombe, ao anatin’ny Cofav, Niisa 173 ireo olona mpitrandraka ala sy harena an-kibon’ny tany tsy ara-dalàna tratra, niisa 200 ny foto-kazo notapahina tsy ara-dalàna.Njaka AndriantefiarinesyL’article Minisitra Raharinirina Vahinala : ady amin’ny fandripahana ala any Amoron’i Mania a été récupéré chez Newsmada.
Ady sy fikasihan-tanana
Nisy korontana sy fifamaliana niafara tamin’ ny fifampikasihan-tanana tamina fiandrasam-paty, tany Vinanintelo Manakara, omaly. Fantatra fa naratra mafy voadaroka ny lehilahy iray. Voatery notazonina any amin’ny hopitaly manaraka fitsaboana akaiky izy, vokatr’izany. L’article Ady sy fikasihan-tanana est apparu en premier sur AoRaha.
Fandaharanasa PEJAA: 870 tapitrisa Ar ho an’ny tanora tantsaha miisa 35
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy, omaly tany Antsirabe, ireo tanora tantsaha mpandraharaha miisa 35 mianadahy. Niofana nandritra ny herintaona izy ireo, mikasika ny fandraharahana amin’ny fambolena ao anatin’ny Fandaharanasa ho an’ny tanora hampiroboroboana ny orinasa miompana amin’ny fambolena sy ny fanodinam-bokatra (PEJAA). Namolavola azy ny governemanta malagasy amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep).Nandritra ny herintaona ny fiofanana, ho an’ny tanora 18 hatramin’ny 35 taona, manana ny mari-pahaizana licence, mavitrika ary manana hevitra sy tetikasa mikasika ny fandraharahana amin’ny fambolena. Avy any amin’ny faritra 22 izy ireo, niofana momba ny asa tany amin’ny Fifamanor Antsirabe.Nandrafitra tetikasa miisa 27Miisa 27 ny drafitrasa narafitr’izy 35 mianadahy. Hoentin’izy ireo hanatanteraka ny tetikasany avy, namatsy vola mitotaly 870 340 000 Ar ho an’ity andiany voalohany sady filamatra ity ny banky BNI, miendrika fampindramam-bola, saingy kely ny tahan’ny zanabola. Miaraka manara-maso ny fanatanterahana ny tetikasa tsirairay ny PEJAA sy ny BNI.Nahafahana nanatontosa ity fandaharanasa PEJAA ny fiaraha-miasa eo amin’ny governemanta malagasy sy ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad). Tanjona ny hampiroboroboana ny fambolena sy ny fanodinam-bokatra. Mitentina 7,23 tapitrisa dolara ny fandaharanasa ka fanomezana tsy onerana ny 6,23 tapitrisa dolara, ho an’ny PEJAA, hanohanana vola ny tetikasan’ny tanora.Nampahafantarina nandritra ity fotoana tany Antsirabe ity koa ny andiany faharoa manaraka.Njaka Andriantefiarinesy L’article Fandaharanasa PEJAA: 870 tapitrisa Ar ho an’ny tanora tantsaha miisa 35 a été récupéré chez Newsmada.
Naterina nivantana ao amin’ny village Voara Andohatapenaka ny asabotsy teo ilay « Toyota Fortuner » nahitana fatim-behivavy tao Sakaraha ny zoma teo. Nahiboka avy hatrany ireo mpandeha miisa 08 tao anatiny ka natokam-ponenana avokoa. « Hatao fitiliana ireo mpandeha. Norarahana fanafody kosa ilay fiara vao tonga tao an-toerana », hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Tsiahivina fa tratra teo amin’ny sakana ara-pahasalamana tao Sakaraha ny zoma atoandro teo ilay 4×4 taorian’ny toromarika voarain’ny zandary ao Sakaraha, avy tamin’ny CCO Toliara. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
MJS: hatsangana tsy ho ela ny tranoben’ny tanora any Sava
Nahavelom-bolo ny tanora tao amin’ny faritra Sava, naheno ny fampanantenan’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, nandritra ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny fandriampahalemana, ny talata lasa teo. Hatsangana, tsy ho ela, hoy ny minisitra lefitra misahana ny tanora, Ratovoson Tahiana Juliana, ny tranoben’ny tanora ao Sambava. Fantatra mantsy fa maro ny tanora any an-toerana ny ao anatin’ny tsy fandriampahalemana vokatry ny tsy fahampian’ny fialamboly, izany indrindra ny antony hananganana ity tranoben’ny tanora ity, hoy hatrany ny fanazavana. Raha tiana ny hanangana firenena vanona dia mila manangana tanora vanona sy vonona handray anjara amin’ny fitandroana filaminana. Hanampy ny tanora hanana izany toe-tsaina izany ny fisian’ny tranoben’ny tanora, hoy hatrany ny minisitra Ratovoson Tahiana Juliana. Tsiahivina, anatin’ny fitetezam-paritra amin’izao ny MJS, mametraka paikady ho fanohanana sy fanampiana ny tanora, ho tanora hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena.Mi.RazL’article MJS: hatsangana tsy ho ela ny tranoben’ny tanora any Sava a été récupéré chez Newsmada.
Volley: miomana amin’ny CCCZone 7 ny GNVB
Mifanindran-dalana amin’ny fankalazana ny faha-10 taonan’ny klioban’ny Zandarmariam-pirenena, afa-po tanteraka tamin’ny vokatra azony ny GNVB, ny faran’ny herinandro teo, ny mpitantana ny klioba. Hitohy avy hatrany ny fanazaran-tena ho an’ireo mpilalao, hitazomana ny herijikan’izy ireo. “Miomana sahady hibata fandresena amin’ny fiadiana ny amboaran’ny klioba tompondakan’ny faritra faha-7 (CCCZone 7), ny GNVB”, hoy ny nambaran’ny filohany, ny Kolonely Rakotomalala Heriniaina. “Mbola hanome ny tsara izahay, amin’ny 10 taona manaraka”, hoy hatrany ny nambarany. Tsy nanadino nisaotra ireo vy nahitana ny fandresena, ny Kolonely Rakotomalala Heriniaina. Isan’izany ny sekretera jeneraly miadidy ny zandarimariam-pirenena sy ny kaomandin’ny zandarimaria. Teo ihany koa ny mpikambana rehetra mandrafitra ny klioba, ny mpilalaon’ny GNVB, ny zandary rehetra, ny mpanao gazety ara-panatanjahantena namana, indrindra ny mpankafy sy mpijery ny taranja volley ball.Mi.RazL’article Volley: miomana amin’ny CCCZone 7 ny GNVB a été récupéré chez Newsmada.